Yakagadziridzwa: Hutsva mhando (nyepera) mifananidzo yeiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus | IPhone nhau
Yakagadziridzwa: Nyowani (nyepera) mhando mifananidzo ye iPhone 7 uye iPhone 7 Plus
Pamakore ese andakateedzera kuvhurwa kweiyo iPhone, ini handirangarire kana imwe chete mave nekubuda kwakawanda kwazvo. Ini handireve kuti isu tanga tisingazive zvese pamberi penguva, kana zvisiri muhuwandu hwerunyerekupe, mifananidzo, mavhidhiyo, madhayagamu, nezvimwe, izvo zvatiri kuona. Nhasi isu takaburitsa mufananidzo unoratidza maA10 processor, a pamberi pepaneru ichisimbisa kusvika kweiyo nyowani yekubata ID uye ikozvino mimwe mifananidzo yaonekwa umo (zvinofungidzirwa) a iPhone 7 uye iPhone 7 Plus goridhe Nezvose zvishoma zvishoma.
Mifananidzo yacho zvaonekwa munzvimbo yeCzech Letem Svetem Applem (kuburikidza MacRumors), asi ivo havaratidze chero chinhu chitsva kwatiri kunze kwekuve epamusoro emhando mafoto ataona kudhara. Matemu ese ari maviri ane mitsara yeiyo antenna kumusoro uye pasi uye iyo makamera mahombe, iri iyo yemhando yepamusoro pamwe nema lenzi maviri. Isu tinogona zvakare kuona kuti iyo mhete yekamera haisisipo uye panzvimbo pacho pane bundu pane iyo dzimba.
Mifananidzo ye iPhone 7 uye iPhone 7 Plus ndeyenhema
Izvo zvatisingaone kumashure kweimwe modhi ndiyo Smart Connector. Runyerekupe rwazvino rwakati Apple yakaronga kuvhura matatu mamodheru, zvakajairwa, iyo Plus nePro, asi izvo zvakabvisa zano kuti pasave nemusiyano wakawanda pakati pemamodeli. Zvichienderana neruzivo urwu, zvingangoitawo kuti pfungwa yekusanganisa iyo Smart Connector muiyo huru iPhone ingadai zvakare yakaraswa, uye kunyangwe nanhasi hazvisi nyore kwatiri kuti tifungidzire zvataigona kuishandisa muchombo umo chisina kukodzera kubatanidza keyboard.
IPhone 7 uye iPhone 7 Plus zvinotarisirwa kunge zvisina chiteshi chefoni, asi iyi mifananidzo haitiratidze yepazasi, saka hatigone kuona kuti vanoipfeka here kana kuti kwete. Zvese zvishandiso zvichaunzwa mumavhiki angangoita mana, panguva iyo makuhwa anozopa nzira kuzvisimbiso zvepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Yakagadziridzwa: Nyowani (nyepera) mhando mifananidzo ye iPhone 7 uye iPhone 7 Plus
Rex plus akadaro
An iPhone pro ingaite seye mini iPad
Pindura Rex plus
Dhizaini yeiyo mbiri lens yekamera inongoita kunge inotyisa kwandiri?
nhema? ikozvino unozviziva here? Kubva panguva yekutanga iwe waigona kutaura kuti iyi haisi aluminium, kana chero chinhu chakadai. Mapurisa epurasitiki !! Iwo maratidziro akateedzerwa kune kesi yandiinayo kubva aliexpress ...
Nhanganyaya kuLas Letras, yemahara kwenguva pfupi